लिङ्गमा मासु पलाएको त छैन ? यो पढ्नुस - anamolpost.com
२ जेष्ठ २०७६, बिहीबार २२:३८
-विवाहित हुँदाहुँदै पनि किन यसरी अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्नुभएको हो भन्ने कुरा प्रश्नमा त्यति स्पष्ट छैन । अर्को व्यक्तिसँग प्रेममय सम्बन्ध छ जस्तो नलागे पनि तपाईंको समस्याको राम्रोसँग विश्लेषण गर्दा यी कुरामा समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्त्यमा के सल्लाह दिन चाहन्छु भने एकपटक चर्मरोग विशेषज्ञसँग परीक्षण गराई उपचार गराउनुहोला । हुन त तपाईंले पछि कस्तो असर पर्ला भन्ने सन्दर्भमा एक हद सम्म अनुमान लगाइसक्नुभयो नै होला, तर रोगको पक्का निदान भएपछि नै दीर्घकालिन असरका बारेमा कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । –साप्ताहिकबाट
बुढेसकालमा यौन सन्तुष्टि लिन नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ : अपनाउनुहोस् यस्तो उपाए
यौन क्षमता बढाउन चकलेट, अण्डा र कफीको कमाल थाहा पाउनुस
यौनसम्पर्कपछि एलर्जी हुन्छ ? उपाय यस्तो छ !